Mr. Didumusi Ntushinga "Ma iloobi doono abaalkii ay Soomaaliya ka geysatay sidii dalkeena uu ku gaari lahaa xornimo"
Mogadishu Jimco 11 May 2012 SMC
Waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray wafdi balaaran oo ka kala socda Dowladaha South Africa iyo Muzampique , kuwaasi oo ka qeyb galay shirka odayaasha uga socda magaalada Muqdisho, waxayna shirkaasi ka jeediyeen khudbado kala duwan oo ay uga hadlayaan farriimo ay ka sidaan Madaxweynayaasha labada wadan.
Safiirka Koonfur Afrika u fadhiya Nairobi Mr. Jeffrey Radebe oo nisagu halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo South Africa, wuxuuna ku ammaanay dadaalka shacabka iyo Dowladda Soomaaliya ay u galeen markii dalkaasi uu ku jiray gumeysiga.
Wuxuu sheegay Safriiku sheegay in Madaxweynaha dalkaas Mr. Jacop Suma uu ballanqaaday inuu bixinayo kaalmooyin lacageed marka ay Soomaalidu heshiis rasmi ah ka gaarto khilaafyada dhexdooda ah.
"Ma iloobi doono abaalkii ay Soomaaliya ka geysatay sidii dalkeena uu ku gaari lahaa xornimo" ayuu yiri Mr. Didumusi Ntushinga oo sheegay in dalkooda uu soo maray marxalado dagaal, balse markii dambe ay ka heshiiyeen isla markaana ay sameysteen dowlad dalka oo dhan ka talisa.
Safiirka South African u fadhiya wadanka Kenya waxa uu ku booriyay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed inay soo afjaraan khilaafyada dhexdooda ah isla markaana dalkooda ay u sameeyaan Dowlad la mid ah tan South Africa kale.
"Haddii aad nabadda qaadataan ee aad heshiisaan waxaad ku tala galeysaan taageerada shacabka Muzampique" ayuu yiri Wasiir K/Xigeenka arrimaha dibadda Muzampique oo sheegay in dowladiisu garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda ee Mozambique Dr. Edwardo ayaa isna madasha shirka odayaasha ka sheegay in Dowladoodu aanay iloobi doonin kaalintii shacabka Soomaaliyeed uu ka geystay ka xoreynta gumeysiga dalkooda heystay, wuxuuna caddeeyay in dalkooda sidoo kale uu soo maray khilaafyo iyo dagaallo u dhaxeeya dadka Muzampique ku abtirsada.